“मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिना को मन” अशोकको सफलता अध्याय (अभ्यासको भिडियो सहित) – Mission Khabar
“मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिना को मन” अशोकको सफलता अध्याय (अभ्यासको भिडियो सहित)
मिसन खबर १८ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार १७:५०
काठमाडौँ, जेठ । झापा दमकका अशोक दर्जी, निक्कै कलिलो उमेरमै चर्चामा आएको एउटा नाम । अहिले सामाजिक सञ्जालमा मात्रै होईन, उनको सफलताको कथा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा छाइरहेको छ । झापामा गुमनाम रहेका अशोक एकाएक चर्चामा आए । कारण थियो, काठमाडौँ आएर रेकर्ड गरेको एउटा गीत दर्जन भन्दा बढी युट्युव ट्रेडिङमा छाँउनु ।
दर्जीको गीत रेकड गर्दाको भिडियो र उनको अन्तर्वार्ता मात्रै होइन, अहिले उनले गाएको गीत नगुन्गुनाउनेहरु निक्कै कम छन् । उनले काठमाडौँ पुतलीसडक स्थित स्टुडियो ९ मा रेकर्ड गरेको गीत “मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिना को मनले अहिले चौतर्फी चर्चा पाएको छ ।
आखिर को हुन त अशोक दर्जी ?
दर्जी झापा दमकमा सामान्य परिवारमा जन्मेका थिए । बाटो होस् वा होटेल दिनभर गीत गाएर धेरथोर रकम जम्मा गर्नु उनको दैनिकि थियो । यहि कमाइर्ले परिवारको सामान्य आवश्यकता धान्थ्यो ।
पढ्ने रुचि धेरै भए पनि विपन्नताका कारण पढ्न पाएका थिएन । अहिले चर्चा चुलिएसँगै दर्जीलाई उर्लाबारीमा रहेको बेथेल एजुकेशन एकेडेमीले १० कक्षासम्म निःशुल्क पढाउने र बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । पढ्ने ईच्छामा राहत पाएका दर्जी अहिले सामाजिक सञ्जालसँगै गायन क्षेत्रका उदाउदाृे प्रतिभा बनेका छन् । एउटा भिडियोबाट चुलिएको अशोकको गायन कहासम्म जान्छ ? प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ ।